May I Help You (2) — MYSTERY ZILLION
May I Help You (2)
January 2009 edited August 2009 in File Request
ရန်ကုန်က လူများအတွက် File Size 400 MB နှင့်အထက်များကို ဒေါင်းပေးပါမည်။
ဒီ Thread အောက်မှာ links များနှင့်တစ်ကွ request လုပ်နိုင်ပါသည်။ :65::65::65:
ပေးထားသော Links များသည် resume လုပ်နိုင်ရမည်.. ရက်ပစ်ရှယ် မှ file များကိုအဓိကထားဒေါင်းပေးပါမည်။ Computer နှင့်ပတ်သတ်သော File များ software များသာ တောင်းနိုင်ပါသည် .. တစ်ခြား movies များ songs များ game များအား ဒေါင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က download လုပ်ပြီးသားတွေကို ဘယ်မှာလာပြီးတော့ယူရမှာလဲဟင်။ ပြီးတော့ download list တစ်ခုကိုလည်း တင်ပေးထား ပါလား။ အဲ့တာဆိုရင် လိုချင်တဲ့လူတွေလည်း အလွယ်တကူရှာလို့ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ထပ်နေမှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး။
အကြံပေးတာနော်။ စိတ်ဆိုးရဘူး။ :67: :67: :67:
p.s မှားတာပါခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ် :77: :77: :77:
download list ကိုလည်းဒီမှာပဲတင်ထားပေးမှာပါ...
အောက်က သုံးခုပါ..အားလုံး file size 600 MB ကျော်တယ်ဗျ...။
ပါ ကို Infofreakzz လိုချင်တာပါ...။ ဒီကဒေါင်းပေးလို့ရပေမယ့် ကျွန်တော်ပြန်လာမှဆိုရင် ကြာနေမှာစိုးလို့ပါ..။
အရေးကြီးမကြီးမသိပေမယ့် ကိုအင်ဖို့အတွက် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် .. Time is Money လေ
အဲဒါကြောင့်ပါ.. ကိုထွက်ပေါက်ကြီးရေ လုပ်ပေးလို်က်ပါနော်..။ ပြီးရင် စေတန့်ဆိုင်မှာ ပို့ပေးပါတဲ့...။
ကျွန်တော်လည်း ဆွဲနေပါတယ် ပြီးတော့ပါမယ်...။
ဒါလေးလဲ လုပ်ပေးပါဦး ကိုထွက်ပေါက်ရယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.....
ဒေါင်းပြီးပါပြီ... 4.24GB တောင်ရှိတယ်နော်..
တနင်္ဂနွေလောက် စေတန်ဆိုင်မှာလာယူလိုက်ပါ ကို Yathar ရေ...
ဟင်..4.24 GBဒီဟာကြီးကို ရအောင်ဒေါင်းတယ်လက်လန်တယ်ဗျာ... တကယ်လေးစားပါတယ်... မည်သည့်အကျိုးကိုမျှမမျှော် ကိုး ဘဲ လုပ်ပေးတဲ့ ... ကို Exiter ကြီးကိုရော ... MZ မင်မင်(များ)... ဘိုစေတန်တို့အပါအ၀င်... အားလုံး ကိုအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... 100 MB အောက်ဆိုရင်တော့ .. အနော်လည်းလုပ်ပေးပါတယ် ...ဒါပေမဲ့.. Rapid Share မပါဘူး.. လုပ်ပါခင်ဗျား... နို့မိုဆို ဒီလိုမျိုး ... (RS) မှာ တင်ထား ပြီးဘယ်သူမှဒေါင်းလို့မရတဲ့(အားလုံးကိုမပြောပါ)...Softwares တွေဆိုရင် ... ကျွန်တော်ဆို ထိုင် ထိုင်ပြီး ... ကြညြ့်ပီးစိတ်ပျက်နေရုံကလွဲပြီး ... ဘယ်လိုမှကို မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး ... အဲဒီမှာ ဘန်းကျော်လေးကလည်း ... Connection ကျ နေ တော့ ... ကျော်..ကျော်နေတာ...ပေါင်တောင်ခွ နေပြီး (ခဏငှားသုံးတာပါ) ... မရတော့ ... ကလေးသာဆို...(အထုပေးအထုပေး..):Dလို့.. အော်ချင်အော်မိမှာပါ... ဒါပေမဲ့ ...ယူတဲ့သူများကလည်း ဒီလောက်အပင်ပမ်းခံပြီးဒေါင်းပေးထားတာကို ... နည်းနည်း အလေးထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ... အပြင်မှာ၀ယ်ရင်တော့ ... ရတာမှန်ပေမဲ့ ... ကိုယ်တိုင် သုံးဖူးပြီးသား လူက..လုပ်ပေးထားတော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ... တွေပါ တစ်ခါ်တည်း သိထား... ရတာပေါ့ ... ပြီးတော့ ... ကိုယ့်အတွက် ... တကယ်လည်း အသုံး၀င်မယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုပါဘူး.. အသုံး၀င်လို့တောင်းတဲ့ဟာကို မဟုတ်ဘူးလား ... ကိုယ့်အတွက်အသုံး၀င်တယ်ဆိုရင် ... MZ အဖွဲ့ကိုလည်း .. ရေရှည် တည်တံ့ ပြီး ... Space တွေအများကြီး၀ယ်နိုင်အောင် ... မိမိတတ်နိုင်သလောက်လေး ... သဒ္ဒါတရားနည်းများ..မဆိုပါ၀င် ... လှူဒါန်းနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့...ခင်ဗျား... ... အမှားပါသွားရင် ... ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျား..
အဲလောက်ဆိုဒ်ကြီး ကြီးကြီးကြီး ကို ကိုထွက်ပေါက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ down လဲ ... ဘယ်လောက်ကြာကြာ Down ရလဲသိချင်လို့ ......
ကျနော် www.mysteryzillion.org ကို HTTrack Website Copier သုံးပြီး down တာ ... ၁၀ ရက်ကျော်ကြာတယ် ( ည Internet ပိတ်ချိန်ရောက်ရင် Hibernate လုပ်ပြီး down တယ် )။ ကျနော်ဆီမှာလဲ Connection ကောင်းပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ အဲလောက်ကြာသွားတယ်။
( Website ကို down တာမို့လို့အဲလောက်ကြာသွားတာလဲပါပါတယ် )
ကိုထွက်ပေါက် လုပ်ခဲ့ရတာလေးတွေလဲ အားလုံးသိအောင်ပြောပြပါဦး ........
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ကို ထွက်ပေါက်ကြီးခင်ဗျာ.....ရှဲ့ရှဲ့ ပါ..:77:
ဟင်..4.24 gbဒီဟာကြီးကို ရအောင်ဒေါင်းတယ်လက်လန်တယ်ဗျာ... တကယ်လေးစားပါတယ်... မည်သည့်အကျိုးကိုမျှမမျှော် ကိုး ဘဲ လုပ်ပေးတဲ့ ... ကို exiter ကြီးကိုရော ... Mz မင်မင်(များ)... ဘိုစေတန်တို့အပါအ၀င်... အားလုံး ကိုအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... 100 mb အောက်ဆိုရင်တော့ .. အနော်လည်းလုပ်ပေးပါတယ် ...ဒါပေမဲ့.. Rapid share မပါဘူး.. :dလုပ်ပါခင်ဗျား... နို့မိုဆို ဒီလိုမျိုး ... (rs) မှာ တင်ထား ပြီးဘယ်သူမှဒေါင်းလို့မရတဲ့(အားလုံးကိုမပြောပါ)...softwares တွေဆိုရင် ... ကျွန်တော်ဆို ထိုင် ထိုင်ပြီး ... ကြညြ့်ပီးစိတ်ပျက်နေရုံကလွဲပြီး ... ဘယ်လိုမှကို မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး ... အဲဒီမှာ ဘန်းကျော်လေးကလည်း ... Connection ကျ နေ တော့ ... ကျော်..ကျော်နေတာ...ပေါင်တောင်ခွ နေပြီး:d(ခဏငှားသုံးတာပါ) ... မရတော့ ... ကလေးသာဆို...(အထုပေးအထုပေး..):dလို့.. အော်ချင်အော်မိမှာပါ... ဒါပေမဲ့ ...ယူတဲ့သူများကလည်း ဒီလောက်အပင်ပမ်းခံပြီးဒေါင်းပေးထားတာကို ... နည်းနည်း အလေးထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ... အပြင်မှာ၀ယ်ရင်တော့ ... ရတာမှန်ပေမဲ့ ... ကိုယ်တိုင် သုံးဖူးပြီးသား လူက..လုပ်ပေးထားတော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ... တွေပါ တစ်ခါ်တည်း သိထား... ရတာပေါ့ ... ပြီးတော့ ... ကိုယ့်အတွက် ... တကယ်လည်း အသုံး၀င်မယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုပါဘူး.. အသုံး၀င်လို့တောင်းတဲ့ဟာကို မဟုတ်ဘူးလား ... ကိုယ့်အတွက်အသုံး၀င်တယ်ဆိုရင် ... Mz အဖွဲ့ကိုလည်း .. ရေရှည် တည်တံ့ ပြီး ... Space တွေအများကြီး၀ယ်နိုင်အောင် ... မိမိတတ်နိုင်သလောက်လေး ... သဒ္ဒါတရားနည်းများ..မဆိုပါ၀င် ... လှူဒါန်းနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့...ခင်ဗျား... :d ... အမှားပါသွားရင် ... ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျား..
ကျတော်တကယ်စမ်းချင်လို့ပါခင်ဗျာ.....ဘုတုတွေခောတ်စားနေချိန်မှာ ကျတော်လဲလင်းနပ် တစ်ခုလောက် စမ်းကြည့်ချင်တာပါ ပုတ်သင်ညို ကို ကျတော်စိတ်ဝင်စားမိလို့ပါ ကျတော် ဒေါင်းပေးတဲ့လူတွေ ကိုစေတနာပျက်အောင်မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာ... ဝယ်လို့လဲမရလို့ပါ....အဲ့ဒါက ကျတော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှားလို့ပါ....ကျတော့်အနေနဲ့ကလဲ ဒေါင်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်တော့အကူအညီတောင်းလိုက်ရာတပါခင်ဗျာ မှားသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ နောက်အဲ့လောက်ကြီးမတောင်းတော့ပါဘူး... :106: :106: :106:
သူလုပ်တာကတော့ IDM နဲ့့ပဲ ဒါပေမဲ့ connction က ပက်ပက်စက်စက် လန်ထွက်နေတာဆိုတော့
ဒီထက်ပိုပြောပြနိုင်ပေမယ့် ကာယကံရှင်ပြောတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်.......:D
ကျနော့်ကူရမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုထွက်ပေါက်ကြီးရေ.. ပြောနော်..။ အားမနာနဲ့..။
ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲဒေါင်းတာပါ။ IDM နဲ့ဒေါင်းတာပါ။ resume ရတဲ့ ဘယ်ဟာကိုမဆို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရင် speed 1.5 M နီးနီး ရပါတယ်.
ရပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော် ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတုန်း ပညာကုသိုလ်တွေယူနေတာပါ။နောက်လည်းတောင်းပါ. အားမနာပါနဲ့.. :67:
ထွက်ပေါက်ရေ။ ဟိုလေ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်နော်။ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်လေ youtube.com တစ်ဆိုက်လုံးကို ဒေါင်းပေးပါလားဟင်။
ကိုယ့်လူ နည်းဘူးလားဟင် ကျနော့်လည်းလိုချင်တယ် Google လေးပဲ ဒေါင်းပေးနော်.....:D
အမလေး ကယ်ပါ.... အဟင့်လူဆိုး နှိပ်စက်တယ် ..
Hardisk အပိုတွေအများကြီး၀ယ်ပေးလေ ဒေါင်းပေးမယ် :P
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောရမှာတောင်အားနာပါတယ်ဗျာ တကယ်ကျေးဇူးပါ ခုလိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက်ရောပေါ့...:67:
ဒီ file လေးကို ဆွဲပေးပြီး အခြား hosting မှာ တင်ပေးပါလားဗျာ.. 4shared.com ဆို အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ..။
နောက်ပြီး Kaspersky Antivirus for Window Server အတွက် file အသစ်အဆန်းလေး၊ တကယ် ကောင်းပြိး အလုပ်လုပ်တဲ့ file လေး ရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးပါဦး ... Key ပါ အပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ..။
http://ifile.it/iv6e94a မှာ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ file size သေးတဲ့ဟာတွေကို
May I help you ... မှာ သွားရောက်တောင်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......:103:
4shared မှာထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... :67:
Kaspersky 8 Patch ပါ။ ဒေါင်းမရလို့ပါ။ ရရင် MZ မှာပဲတင်ပေးပါ။ :77::77::77:
ကို exiter ကြီး :d :d ကူညီပါ ..
ကျွန်တော် ifile.it မှာတင်ပေးထားတယ် ။ အဆင်ပြေလားမသိဘူး ။
:OBagan ကဘန်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။ MZ မှာပဲတင်ပေးနော်... :77:
MZ download center ကျွန်တော်တင်နေတာ ၊ တင်လို့မရဘူးဗျ.....ပြန်ပြန်ကျသွားတယ် ။
http://rapidshare.com/files/183460427/L ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/183460197/L ... .part2.rar
http://rapidshare.com/files/183460297/L ... .part3.rar
http://rapidshare.com/files/183459945/L ... .part4.rar
အပေါ်ကပေးထားတာတွေက တူတူပဲလို့ပြောပါတယ်..အဲဒါဒေါင်းလို့မရလို့...ပြီးရင်ဘယ်မှာလာယူရမလဲဆိုတာပါပြောပါ....:77:.:((ကျွန်တော်ဒေါင်းတာ "Can't download this file.
HTTP:/1.0 503 Exceeded. ဆိုပြီးတော့ပြနေလို့ပါ...:77::77::77:
ဘာမှပူနဲ့ ယူလိုက်တော့ 123
ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ..Torrents တွေကိုကော download လုပ်ပေးပါသလားခင်ဗျာ
Torrents တွေ ကို ကျွန်တော့်ဆီမှာဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ ...နောက်ပြီး ftp links တွေလည်း ဒေါင်းရတာမလွယ်ပါခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော်ဒေါင်းကြည့်ပါသေးတယ် ၊ McAfee Site Advisor ကလုံးဝကို block လုပ်ပါတယ် ။
Albertino Binder ဆိုတဲ့ဟာလေးကို လိုချင်လို့ပါခင်ဗျာ...
သူ့ရဲ့ မူလဘူတ Original Version လေးပဲ ပေးကြပါနော်...
တလက်စတည်း... resource hacker ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း ကူညီကြပါအုံးနော်.. :77:
ကျွန်တော့်ပို့စ်ကို ဘယ်သူမှ ဂရုလည်းမစိုက်ကြဘူး..ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတာ မရရင်လည်းမရဘူးဆိုတာကိုပြောပေးပါလား..နို့မို့ဆိုရင် ကျွန်တော်က တမျျှော်မျှော်နဲ့..အခုလည်းဆက်ပြီးမျှော်လိုက်ပါဦးမယ်..
အပေါ်ကပေးထားတာတွေက တူတူပဲလို့ပြောပါတယ်..အဲဒါဒေါင်းလို့မရလို့...ပြီးရင ်ဘယ်မှာလာယူရမလဲဆိုတာပါပြောပါ....:77:.:((ကျွန်တော်ေ ဒါင်းတာ "Can't download this file.
ကျွန်တော့်ပို့စ်ကို ဘယ်သူမှ ဂရုလည်းမစိုက်ကြဘူး..
ကျွန်တော်ဒေါင်းပြီးသွားပြီဗျ ... ဒါပေမယ့်ပြန် upload တင်ပေးဖို့ကြတော့ခက်တယ်ဗျာ ..
ကျွန်တော်ဘယ်မှာလာပေးရမလည်းဆိုတာ ကျွန်တော့်ဆီကို PM ပို့လိုက်ပါခင်ဗျာ ..
အခုလိုဒေါင်းပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....ဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမမေ့ပါဘူးခင်ဗျာ...ပေးဖို့ကိုကျတော့ အစ်ကိုက ပြန်တင်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ အစ်ကိုလာပေးမှာကိုအားနာပါတယ်...ကျွန်တော်ပဲလာယူလိုက်ပါ့မယ်.....အစ်ကိုအဲဒါကို memory stick နဲ့ယူရင်ရမလားမသိဘူူး..ဘယ်လောက်ဆိုက်ရှိပါလဲခင်ဗျာ.... အစ်ကို့ဖုန်းနံပါတ်လေးကို (ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်) ပေးပါလား... ကျွန်တော့် gmail က [email protected]... ပါ... အဲဒိ့ကို ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးထားလိုက်ပါလား...ခင်ဗျာ...pm ကကျတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့၀င်ကြည့်ဖြစ်တာနည်းသလို...သူများတွေကိုလည်းကိုယ့်လိုပဲထင်လို့..(ကိုယ်ပျင်းတာကိုမပြောဘူးနော်)..gmail ကတော့နေ့တိုင်းနီးပါး၀င်စစ်ဖြစ်ပါတယ် ...အခုလိုကူညီတာ ထပ်လောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ခင်ဗျာ.....]
(ဖုန်းနံပါတ်ပေးရင် ကိုထွက်ပေါက်ကြီး ဆိုရင်ရတဲ့ဖုန်းမျိုးနော်အစ်ကို)
098552636 ကိုဆက်ပြီး ဖြိုးဟိန်းကျော် နဲ့ပြောချင်လို့ဆိုရပါတယ် .... ဒါပေမယ့် အဲဒီဖုန်းက ကျွန်တော် Saturday နဲ့ Monday တော့ မနက် ၆ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိရှိတယ် ... အဲဒီနေ့တွေဆက်လိုက်ပါ .... ကျွန်တော်က လေဆိပ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် ။။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...တကယ်တမ်းပြောရရင်..ကျွန်တော်က ကာတာမှာရောက်နေတာပါ....အင်တာနက်ကို ကောင်းကောင်းသိတာသုံးတတ်တာအဲဒိကိုရောက်မှပါ....ကျွန်တော့်အလုပ်က pc-operator ပါ...အရင်တုန်းကတော့ အစိကိုတို့တင်သမျှတွေကို ကြိုက်တာမှန်သမျှမလွတ်တမ်းဒေါင်းခဲ့ပါတယ်...အခုပြောချင်တာက မနေ့ကနေစပြီး...ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ ကဲထားပါ ရုံးရဲ့ server မှာ virus ၀င်ပါတယ်...ဘာလဲမသိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ဒေါင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်..ဘာမှဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး...မနည်းဖိုက်ထားလို့ အီးမေးကနေတော့လာတဲ့ဟာတွေကို ဒေါင်းလို့ရပါတယ်...အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာ သူတို့က ဒေါင်းတဲ့ pc ရဲ့ ip ကိုမှတ်ပြီး... action ယူတယ်...ကျွန်တော့်ရှေ့မှာသုံးယောက်လောက်ဖြစ်သွားပြီးပြီ...အဲဒါသိချင်တာက သူတို့မသိအောင် ကျော်ဒေါင်းလို့ရလားဆိုတာရယ်....နောက်ပြီး အစ်ကိုက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ညီကိုပဲလာယူခိုင်းလိုက်ပါမယ်...ဒါမှမဟတု်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့....ပြန်လာမှလက်ဖက်ရည်တိုက်မုန့်ကျွေး...ပါ့မယ်....ဟီး..မျက်နှာလုပ်ထားတာ...အစ်ကိုကူညီတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....ပြန်ရောက်မှ ၀င်နှုတ်ဆက်ပါ့မယ်...ကျွန်တော်ခဏကပြောချင်တာကကိိုယ့် ip ကိုဖျောက်တဲ့ဟာမျိုးပါ...မမြင်ရအောင်လေ...ဖမ်းလို့မရအောင်ပါ...အင်တာနက်သုံးပြီး မဒေါင်းရတဲ့ မစားရ ညော်ခံလိုဖြစ်နေလို့ပါ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အော် ကျွန်တော့်နာမည်က စစ်နိုင်...ပါ...အခုကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ် က နေရာမှားနေပေမယ့် တစ်လက်စတည်းမို့လိုပါ...
ကျွန်တော်ခဏကပြောချင်တာကကိိုယ့် ip ကိုဖျောက်တဲ့ဟာမျိုးပါ...မမြင်ရအောင်လေ...ဖမ်းလို့မရအောင်ပါ...အင်တာနက်သုံးပြီး မဒေါင်းရတဲ့ မစားရ ညော်ခံလိုဖြစ်နေလို့ပါ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အော် ကျွန်တော့်နာမည်က စစ်နိုင်...ပါ...အခုကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ် က နေရာမှားနေပေမယ့် တစ်လက်စတည်းမို့လိုပါ...
Hide IP Platinum Ip faker IP ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ ဒီမှာယူလိုက်ပါ။ ကျနော်တော့ မသုံးကြည့်ရသေးဘူးဗျ။ အခက်အခဲတစ်ခုခုရှိရင် ပြောပါ။ ထပ်ရှာပေးမယ်လေ။
ကျွန်တော်က ဒေါင်းလို့မရပါဘူးလို့ပြောတာကို....လူကိုသွားရည်ကျအောင် လာဒေါင်းခိုင်းနေတယ်...အဟီး...ဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီလက်စနဲ့...ကူညီပါ့လားဟင်...ကျွန်တော့် မေးထဲကို ပို့ပေးပါလား...မရလည်းအကြောင်းမဟုတ်ပဘူး...သွားရည်ကျရုံတင်ပါ....နောက်ပြီး...ကျွန်တော့်မေးက [email protected] ပါ...လိုချင်လိုက်တာနော်...အဲဒါသာတကယ် ip ဖျောက်ပေးနိုင်ရင် ကိုယ်ပျောက်၀တ်ရုံ ရလိုက်သလိုပဲနေမှာ...အစ်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်စမ်းပေးပါလား...ဟင်....စမ်းသပ်ပြီးမှ ကျွန်တော်ကသုံးရဲမှာ...နို့မို့ဆိုရင် တစ်ခါတည်းကွိသွား:လိမ့်မယ်...မြန်မာနိုင်ငံကို အော်တိုမတ်တပ်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်...သနားကြပါခင်ဗျာ....:((:((:((:((:((:((:77::77::77::77::77::77::77::77::77::D:D:D:D
ဘယ်မှာ လှုဒါန်းရမလဲဆိုတာကို ပြောပါအုံး... တက်နိုင်သလောက်ကူညီမလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အတွက် အများကြီးအကျိုးထူးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် .... အကယ်လိုကများ အင်တာနက်ကနေ၀ယ်ကမယ့်ဆိုရင် ပြောပါ (အသေးစိတ်) ကျွန်တော် စရိတ်နည်းရင် ၀ယ်ပေးပါမယ်။ ဒီ mz ကို ရေရှည်တည်တံ့ စေဖို့ပါ.....:):):)
ဒီ software လေးကို full version လိုချင်လို့ဗျ
AVD Weight and Volume Calculator 6.0.1
thanwinnaing wrote: »
AVD Weight and Volume Calculator 6.0 Crack ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလို့ရပြီး zip ဖြေလို့ မရဖြစ်နေတယ်ဗျ။:)
ကို exiter ရေ..
ကျနော် C++ assignment မှာ flowchart ဆွဲဖို့ MS office visio 2007 လေးလိုချင်လို့ပါ။ တစ်ဆက်တည်း ကျနော့မှာ MS office 2007 တင်ပြီးသားရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါ visio မပါတော့ သူချည်းသီးသန့်တင် လို့ရမယ့် ဟာမျိုးလေး ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ (Assignment တွေအားလုံးက နောက် အပတ်ထဲမှာ တင်ရမှာမလို့ MS office ကို တင်လိုက်ချလိုက်မလုပ်ချင်လို့ပါ။) Open source ထဲကဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။
:77: :77: :77: :77:
ကူညီကြပါ... Assignment ကဖင်နားကပ်နေပြီ...
Dispatch 1.5 Truck Scale Software
သူ့ဆိုဒ်မှာ ရက် ၉၀ အစမ်းပေးထားပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က full version ရနိုင်မယ်ဆို လိုချင်လို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ် အခြား truck scale software ကောင်းကောင်းလေး ရမယ်ဆိုရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူကိုပြောတာလဲ ခင်ဗျာ... ကျနော့အတွက်လား။
ဒီမှာယူလိုက်ပါ။ iFile မှာတင်ပေးထားပါတယ်။:67:
Adobe Premier lastest version နဲ့ microsoft office suite 2007 ကို လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. crack ပြီးသွားလေးတွေ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်... office 2007 တင်ပဲတင်ပေးပါခင်ဗျာ.. တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို လင့်ခ်ပေးရမှာမို့လို့ပါ.. ကျေးဖူးအထူးပါ.. :)